Libya: Maty izay rehetra manao zavatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2011 9:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, 한국어, Français, Español, Aymara, bahasa Indonesia, English
Anisan'ny vaovaontsika manokana ity lahatsoratra ity Fitroatran'i Libya taona 2011.
Vao nanao lahateny tezitra tamin'ny fahitalavitra Lybiana ny mpanao didy jadona Muammar Al Gaddafi any Lybia androany, Talata, mampitandrina sy mampatahotra ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta sy ny mpanara-dia azy ireo, fa hiafara toa an'i Afghanistan, Irak, na i Somalia i Lybia. Nankahery ny Lybiana hiverina any an-tranony izy rahampitso ary handroaka ireo “mpampihorohoro” ary hitondra azy ireo any amin'ny mpitandro ny filaminana “ho saziana ho faty”. Nilaza izy fa tsy hijanona ny hiady ho an'i Libya mandra-paha-“tapitry ny rany farany” ary tonga hatramin'ny filazana amin'ny antsipiriany madinika izay mety hanasaziana mandra-pahafaty, isan'izany ny fiasana ao anatina fikambanana vahiny, fampiasana hery manohitra ny polisin'ny governemanta, na fanohintohinana ny firaisam-pirenena. Ny korontana, izay tsy hita hoe lahateny voasoratra nefa hitan'ny Libyana, ny Arabo, sy ny mponina rehetra eo amin'ny Twitter, ary nitarika fanarabiana sy ny fanaratsiana, eny fa na dia eo anatrehan'ny toe-javatra tena mampalahelon'ny fahafatesana sy ny tsy filaminana eo amin'ny firenena.
Nohamarinin'i Gaddafi ny fivakisan'i Libya noho ireo fanoherana tato anatin'ny andro vitsy vao haingana, mandahatra ireo vanim-potoana eo amin'ny tantara raha namono ny mpanao fihetsiketsehana ny governemanta, milaza zavatra sahala amin'ny hoe, “Lehibe kokoa ny firaisan'i Sina noho ireo olona teo an-kianjan'i Tianamen.” Rahampitso, hoy izy , ny tanora (izay tsy “mandray zava-mahadomelina”) dia tokony hanangana komity hiaro ny revolisiona. “Maro noho izy ireo isika,” hoy izy.
Eo am-piandrasana azy hanao ny lahateniny, maminavina mahatsikaiky ny tweeple hoe fa maninona ary izy no tara manome ny lahateniny mialoha ny fotoana.
@acarvin: Gaddafi: atrakao ho amin'ny revolisiona ny lohanao, ho amin'ny ady ho amin'ny fanafahana.
@acarvin: Gaddafi: nesorina tamin'ny fianakaviany ny tanora ary nomena nofinofy. Natao ho an'ny olona nanome azy ihany ny sazy.
@rania_hafez: Gaddafi: ireo izay manohitra ny fahefana Lybiana , sazio ho faty ireo izay mamoaka ny fitaovam-piadiana ho amin'ny Lybiana hafa araka ny lalana any Lybia
@draddee: Gaddafi mangataka ny komity sosialy hiaro ny soatoavim-pirenena, ny toe-tsaina sy ny fomba #Libya
@habibh: #Gaddafi mampitahotra ny olony ihany amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny didy mandra-pahafaty…
@kimo79: Ny zavatra lehibe indrindra izay nataon'i #gaddafi niaraka tamin'ny lahateniny tsy manjary dia ny hoe atambany hatrany hatrany ny revolusion'i #libya.
@blakehounshell:inona no vakiany izao?
@themoornextdoor: Vakiany avy amin'ny boky : tsy misy na inona na inona ny pejy, amboariny araka ny fahitany azy eo ilay izy
@EDSETIADI:Ary dia manomboka mamaky avy ao amin'ny boky maitsony ity mpanonofy. Oh, ary toa lasa lava be ilay izy. http://twitpic.com/42m3bt
@timrylands: Amin'izao i Gadaffi dia miseho ho mpampianatra taloha antitra be marary saina manamarika ny boky fampihomehezana any #libya http://yfrog.com/h6vdwp
@acarvin: Gaddafi: Tsy mila ahy na i Lybia izy ireo. Asa ratsy izany. Ireo rehetra manao ratsy dia tokony ho saziana ho faty.
@Ssirgany: Nanova ny solomasony hamakiany avy ao amin'ny boky maitso.
@iandstone: Gaddafi mivazavaza. “Aiza ny voalavo sy ny mpanao ratsy ?” “Manafika ny komisaria tahaka ny totozy?” Mila Rentokill ilay zalahy io
@tololy: Ankehitriny Gaddafi: “Raha tonga amin'ny fampiasan-kery ny raharaha, dia HAMPIASA izany amin'n'y lalàna iraisam-pirenena isika & ny lalam-panorenana Libyana”
@Raafatology: #Hoy i Gaddafi ” I Gaddafi no Voninahitra” Tsy mivazivazy aho. hoy izy mantsy #Libya
@rania_hafez: Miantso ireo olona tia azy i Gaddafi, hivoaka ka hiaro ny firenena amin'ireo jiolahy mamon-drongony eny amin'ny arabe amin'izao fotoana!!(ady an-trano) #libya
@acarvin: Gaddafi:tsy mampiasa hery hanoherana ny vahoaka izahay fa hampiasa hery izahay raha ilaina, araka ny lalàna iraisam-pirenena sy ny lalàna Libyana.
@avinunu: Gaddafi: “Tokony hidina an-dalambe ireo tanàna sy vohitra rehetra tia an'i Muammar Gaddafi”
@acarvin: Gaddafi: Miaraka amin'ny solika namadihana ny vahoaka, mialà ny tranonao, arovy ny lalana, esory any ny voalavo mpanimba.
@acarvin: Gaddafi, asehoy imaso ny fitaovam-piadiana: Ireo izay mitam-basy, ny vahoaka tanora nomena fiara mifono vy.
@acarvin: Gaddafi: tompon'andraikitry ny komitim-bahoaka ianao. Miantso ny vahoaka Lybiana aho hanangana tanàna vaovao araka ny nolazain'ny zanako lahy.
@nour_odeh: #Gaddafi: hihomehezan'izao tontolo izao ianao [ny mpanakorontana]. Mila manangana tanàna vaovao ny vahoaka, komitim-bahoaka toan'ny nolazain'i Saif anao ry #Libya
@ChangeInLibya: Mianiana amin'ny vahoaka izy, izay “manohana azy”, “eo amin'ny sehatra maitso”… Sary ef 20 andro lasa ihany koa teo amin'ny sehatra maitso no naseho 🙂
@acarvin: Gaddafi: efa voavahy ny olan'ny fiadiana fahefana.
@acarvin: Gaddafi: izay no efa neken'ny vahoaka Libyana. Any amin'ny hopitaly, birao, ambanivohitra, n'aiza n'aiza.
@nour_odeh: #Gaddafi: Avelantsika ho an'ny vahoaka ny fahefana tamin'ny 1977. Tsy momba an'iza an'iza isika na fahefana iza na fahefana iza, fa miady ho an'i Libya &amp ihany; miaro an'i #Libya
@Dima_Khatib: Gaddafi: miezaka ny tanora sasany indraindray te hanaraka ny zava-nisy tany Tonizia & Ejipta #libya #feb17
@avinunu: Mandà i Gaddafi hoe nilaza izy fa tsy mitana fahefana mihitsy, fa mitana izany izy talohan'ny 1977 ho amin'ny vahoaka Lybiana.
@draddee: Gaddafi: Isika no voalohany niady tamin'ny Etazonia sy ny Birtanika teto amin'ny tanintsika ary nilaza fa ho faty ho azy isika mandra-pialan'izy ireo. Aiza ianao izao? #Libya
@acarvin: Gaddafi: Any amin'ny hopitaly, tsy misy sahy manova anarana. Aiza ianao, ianao ry mersenera? izay sahy nanao izany zavatra izany?
@avinunu: Nilaza ihany koa i Gaddafi fa polisy daholo ireo rehetra maty.
@TravellerW: Tsy leo ve ireo mpanao didy jadona amin'ny “fanomezan-tsiny ireo vahiny ireo” ? #libya #gaddafi
@JNovak_Yemen:Miantso ny vahoaka hidina an-dalambe ny #Libyana mpanonofy hiady amin'ireo mpanao fihetsiketsehana, maka pejy avy amin'ny #AliSaleh rent-a-mobs #Yemen
@Ssirgany: Miantso avy hatrany ny ady an-trano izy, milaza ireo mpanohana azy handray ny arabe, MITAM-BASY. #gaddafi #libya
@evanchill:Nahita vahoakan'ny “mpanohana an'i Gaddafi” vitsivitsy ihany farany ny fahitalavi-panjakana Lybiana, nefa izy ireo mandeha tsy misy fotoana, tsy misy toerana mba ahitana azy ireo.
@sate3: http://twitpic.com/42lt4u – Mazava mihitsy fa fifaninanana tsy misy dikany ity & lahateny mampatezitra nataon'ny olona kivy, tsy manampy & mpanao didy jadona ratsy toetra. #Feb17 #Libya
@Arabista: Tena mihoatra ny fefy mihitsy izy amin'izao!!!
@artate: Eo amin'ny endrika averin'ny fitaratr'i Ghadaffi, tsy afaka mahita olona ianao eo anoloany, sa tsy izany?… http://tinyurl.com/6632g87 #libya #crazytalk
@ChangeInLibya: Tsy azoko? Raha nianiana tamin'ny razambentsika izy tsy hiady amin'ny Amerikana.. Izany hoe ejipsiana sy toniziana ve izany isika? #feb17
@blakehounshell: Tena mahazendana hoe ahoana ny aloky ny mpanohitra ny retorika Amerikana no maneno amin'izao fotoana izao #Qaddafi
@sate3: Ny zavatra hita ivelan'ny tranobe izay nanaovan'i #Gaddafi is giving his speech #Feb17 http://twitpic.com/42lwil
@alexlobov: Misy olona afaka ny hanala azy ve amin'izao & hanafaka antsika rehetra amin'ny fahantrana?
@ceoDanya:Marary saina i #Gadafi.
@Cyrenaican: Tsy matahotra anao izahay, tsy ho vahoakanao izany mihitsy izahay .
@ceoDanya:MAHITA OLONA HOATR'IZAY NOLAZAIKO ANAO IZAY VE IANAO, IZAY RESAHIN'NY VAHOAKA LYBIANA! Mila fanampiana isika! Marary saina ireo lehilahy ireo!!
@lisang: Mihevitra aho fa mifampizara taratasy ireo mpanao didy jadona ireo. Haino aman-jerin'ny demony avy any ivelany, fanoroana vahiny ratsy, alatsako hoan'ity firenena ity ny rako, fotoan'ny fanovana izao
@tomgara: Jereo ry Amerikana, efa nohalefahan'i Reagan ity tranobe ity. Tsy tokony ho mafy be ve isika hamita hatramin'ny farany ny asantsika. Fiafarana feno tena tsara ho an'ny FAHITALAVITRA.
@algergawi: Tokony havadika amin'ny teny Arabo ihany koa ny lahatenin'i Gaddafi Arabo.
@Mustafa_Qadri: “Tsy marina izany, nangalarin'i Michael Jackson ny akanjon'ny kolonely avy tamiko” hoy i Gaddafi “Hevitro ny manao saron-tanana ilany fotsy!”
@bongkersz: Manontany tena aho ray hiverina hitapy eo amin'ny Youtube indray i Hitler satria #Gaddafi toa marary saina kokoa noho izy..
@TravellerW: Miverina matetika eo amin'ny lohahevitry ny lahatenin'ny mpanao didy jadona ny hoe hatraiza “no manankorontana ny ankizy/tanora/sns” ny mpanao fihetsiketsehana, mba hanambaniana ny mpanohitra. #libya
@AfriNomad: Miditra ao anatin'ny lahateniny #2 na #3 ve iny? Ary ahoana ny hevitr'i #Gaddafi amin'ny fisainana mirohatra amin'ny voalavo & nofinofy? #Libya #Feb17
@lioncub4justice: Vaovao farany: adala i #Gaddafi #Libya
@warrenellis: Toa miha lefy laza ny lahatenin'i Gadaffi nanjary hoe “mandrongony daholo ny olon-drehetra ankoatr'ahy. Izaho koa Batman.”
@thelieisacake: tena ho olona marin'ny fahavonona sy ara-moralin'ny fiaraha-monin'ny Fihaonam-ben'ny Fiarovam-pirenena/raharahan'ny Firenena Mikambana i #Gaddafi izay manao raha any #libya